UDANIYELI 10 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
UDANIYELI 10UDANIYELI 10
UDaniyeli utyhilelwa iziganeko zexesha elizayo
101Kunyaka wesithathu uSirasi engukumkani wasePeshiya uDaniyeli okwabizwa ngokuba nguBhelteshazare watyhilelwa udaba oluthile. Olo daba luyinyani, kodwa kunzima ukululandela.Okanye “yaye lumalunga nemfazwe enkulu” Kambe ke waluchazelwa ngombono.
2Ngelo thuba ke mna Daniyeli ndazila iiveki zada zantathu. 3Ndandingatyi kutya kodidi, nditsho nenyama nawayini zange ndizifake emlonyeni wam, yaye zange ndithambise nokuthambisa kwada kwadlula ezo veki zintathu.
4Ke kaloku ngosuku lwamashumi amabini anesine kwinyanga yokuqala yonyaka ndandimi phezu komlambo omkhulu iHidekele.Oko kukuthi “iTigre” 5Ndathi ndakukhangela ndabona indoda enxibe iimpahla zelinen, ibhinqe ngebhanti yegolide ecwengileyo. 6Umzimba wayo wawubengezela okwelitye elinqabileyo, ubuso bayo bunjengombane, ke amehlo wona enjengezibane ezivuthayo. Iingalo zayo nemilenze zazimenyezela ngathi lubhedu olukhazimlisiweyo, ilizwi lona livakala ngathi yingxokolo yabantu abaninzi.SiTyh 1:13-15; 2:18; 19:12
7Lo mbono ke wabonwa ndim ndodwa mna Daniyeli. Amadoda endandikunye nawo wona zange awubone, koko asuka arhwaqela, aphakuzela, aya kuzimela. 8Ke mna ndasala ndodwa ndiwubukele loo mbonokazi. Ndasuka ndavikiveka, nobuso bam bambatsha, ndaphelelwa tu ngamandla. 9Ndayiva ke ithetha, ndathi ndisaphulaphule njalo ndalala obunzulu ubuthongo, ubuso bam bujongise emhlabeni. 10Ndeva ndichukunyiswa sisandla, sandimisa ngamadolo kunye neentende zezandla zam ndigevezela.
11Loo ndoda ke yathi kum: “Daniyeli, ungumfo oxabiseke kunene. Kambe ke phakama, ume kuloo ndawo ukuyo, uwagqale la mazwi ndiza kukuxelela wona, kuba ndithunywe kuwe.” Yakutsho ke ndaphakama, kodwa ndisangcangcazela.
12Yaqhuba ke yathi: “Sukoyika, Daniyeli. Kaloku uThixo wawuva kwamhla-mnene umthandazo wakho ngalaa mhla waqala ukuzithoba, ufuna ingcaciso. Ndilapha nje kungenxa yaloo mazwi akho. 13Kambe ke isithunywaIsiHebhere sithi “itshawe” nangezantsi kwivesi yama-20 neyama-21 sombuso wasePeshiya sachasana nam iintsuku ezimashumi mabini ananye. Ndide ndancedwa yingqwayi-ngqwayi yezithunywaIsiHebhere sithi “itshawe” nangezantsi kwivesi yama-20 neyama-21 zikaThixo uMikayeli,SiTyh 12:7 weza kundikhulula apho ndandithintelwe khona ePeshiya. 14Ngoko ke ngoku ndize kukuchazela izinto eziya kuhlela amawenu kwimihla ezayo, kuba kaloku lo mbono unxulumene naloo mihla.” 15Ithe ke yakutsho mna ndajonga phantsi, ndisikwe umlomo.
16Ke kaloku umfo omfano ingathi yeyomntu wolula isandla, wachukumisa imilebe yam, ndaza ndawuvula umlomo wam ndathi kuye emi phambi kwam: “Mnumzana, lo mbono unditsho ndonganyelwa kukoyika; ndiphelelwe ngamandla. 17Kuxa bendingubani ke mna sicaka sakho, ukuba ndide ndithethe nenkosi yam? Sendiphelelwe nangamandla la; kunzima nokuphefumla oku.”
18Waphinda ke loo mfo ufana nomntu wandichukumisa, ndaza ndatsho ndomelezeka. 19Waqhuba wathi: “Mfondini, uxabisekile! Musa ukoyika; yomelela; ewe, yomelela ube noxolo.”
Akuba etshilo ke, ndatsho ndomelela; ndaza ke ndathi kuye: “Undomelezile; thetha, nkosi yam, ndiphulaphule.”
20Waza wathi: “Uyayazi ngoku into endizise apha kuwe. Kodwa kusafuneka ndijike ndiye kulwa nesithunywa sombuso wasePeshiya. Ndakuba ndimkile kuya kuvela isithunywa sombuso wamaGrike. 21Kambe ke mandikutyhilele loo nto ibhaliweyo eNcwadini yeNyaniso. Akukho bani undixhasayo ekulweni nâbo bachasene nam ngaphandle koMikayeliSiTyh 12:7 isithunywa senu.